ခေါက်ဆွဲထုပ်များကို ညတိုင်းချက်စားတဲ့ ၁၈ နှစ်ရှိကျောင်းသား အစာအိမ်ကင်ဆာဖြင့်သေဆုံး :o :o :o – ရှအေလငျး
ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူတဲ့ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေကို နေ့တိုင်းချက်စားတဲ့ ထိုင်ဝမ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကလေးတစ်ဦး အစာအိမ်ကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသွားပါတယ်။ သတင်းအရ အဆိုပါကလေးဟာ ယင်းကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု အကျင့်ဆိုးကြီးကို မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်မှစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ညတိုင်းခေါက်ဆွဲထုပ်တွေကို ချက်ပြုတ်စားသောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းကို အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀အထိ သူ့ရဲ့ နမော်နမဲ့နေထိုင်စားသောက်တတ်တဲ့ အကျင်းဆိုးကို မဖျောက်ဖျက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ သူ့အတွက် ဘ၀နိဂုံးချုပ်တဲ့နေရာသာ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ဗိုက်တွေဖောင်းတင်း၊ ပျုံ့ခြင်းနှင့် အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် သူ့မိသားစုဝင်တွေ စိတ်ပူလာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဆေးဝါးကုသမှုပြုလုပ်ရန် ဆေးရုံတစ်ခုသို့ ခေါ်ယူသွားပြီး ရောဂါကို စစ်ထုတ်ကြည့်ရာတွင် အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာရှိနေတာကို စိတ်တုန်လှုပ်စရာပင် တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ ကင်ဆာက တခြားခန္ခာကိုယ်အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ၄င်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးအတွက် ကြာကြာအသက်ရှင်ဖို့ မျှော်လင့်စရာမရှိပါဘူး။ တစ်နှစ်ကျော်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သူ့အသက်ထွက်သွားပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချဉ်သနပ်အစားအစာတွေ၊ ၀က်အူချောင်းတွေ၊ အသားကင်တွေနဲ့ အသင့်ချက်ပြုတ်နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေကို လျှော့စားဖို့ ကင်ဆာရောဂါပညာရှင် ဒေါက်တာ Gan မှ လူထုကို သတိပေးနိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ Ref: Thawn Khai.. Source: World of Buzz
ပွငျဆငျရလှယျကူတဲ့ခေါကျဆှဲထုပျတှကေို နတေို့ငျးခကျြစားတဲ့ ထိုငျဝမျမှ ၁၈ နှဈအရှယျ ကြောငျးသားကလေးတဈဦး အစာအိမျကငျဆာဖွငျ့ သဆေုံးသှားပါတယျ။ သတငျးအရ အဆိုပါကလေးဟာ ယငျးကဲ့သို့ ကနျြးမာရေးနဲ့မကိုကျညီတဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှု အကငျြ့ဆိုးကွီးကို မူလတနျးကြောငျးသားအရှယျမှစတငျခဲ့တာဖွဈပွီး ညတိုငျးခေါကျဆှဲထုပျတှကေို ခကျြပွုတျစားသောကျခဲ့ပါတယျလို့ သိရပါတယျ။
အထကျတနျးကြောငျးကို အောငျမွငျစှာပွီးဆုံးသှားပွီး တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝအထိ သူ့ရဲ့ နမျောနမဲ့နထေိုငျစားသောကျတတျတဲ့ အကငျြးဆိုးကို မဖြောကျဖကျြနိုငျတဲ့အဆုံးမှာ တက်ကသိုလျဆိုတာ သူ့အတှကျ ဘဝနိဂုံးခြုပျတဲ့နရောသာ ဖွဈသှားပါတော့တယျ။ သူ့ရဲ့ဗိုကျတှဖေောငျးတငျး၊ ပြုံ့ခွငျးနှငျ့ အစာအိမျနာကငျြခွငျး စသညျ့လက်ခဏာတှေ စတငျဖွဈပျေါလာတာကွောငျ့ သူ့မိသားစုဝငျတှေ စိတျပူလာပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဆေးဝါးကုသမှုပွုလုပျရနျ ဆေးရုံတဈခုသို့ ချေါယူသှားပွီး ရောဂါကို စဈထုတျကွညျ့ရာတှငျ အသကျဆုံးရှုံးမှုဖွဈစနေိုငျတဲ့ အစာအိမျကငျဆာရှိနတောကို စိတျတုနျလှုပျစရာပငျ တှရှေိ့သှားပါတယျ။ ကငျဆာက တခွားခန်ခာကိုယျအတှငျးရှိ အစိတျအပိုငျးတှကေိုပါ ကူးစကျပြံ့နှံ့သှားပွီဖွဈတာကွောငျ့ ၄ငျးဆယျကြျောသကျကလေးအတှကျ ကွာကွာအသကျရှငျဖို့ မြှျောလငျ့စရာမရှိပါဘူး။ တဈနှဈကြျောပွီး နောကျဆုံးတှငျ သူ့အသကျထှကျသှားပါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါဖွဈစနေိုငျတဲ့ အခဉျြသနပျအစားအစာတှေ၊ ၀ကျအူခြောငျးတှေ၊ အသားကငျတှနေဲ့ အသငျ့ခကျြပွုတျနိုငျရနျ ထုတျလုပျထားသညျ့ ခေါကျဆှဲထုပျတှကေို လြှော့စားဖို့ ကငျဆာရောဂါပညာရှငျ ဒေါကျတာ Gan မှ လူထုကို သတိပေးနိုးဆျောလိုကျပါတယျ။ Ref: Thawn Khai.. Source: World of Buzz
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အချိန်ဆွဲမှုကြောင့် “မသေသင့်ပဲ လူတစ်ယောက် သေဆုံး သွားရလေခြင်း” ဆိုပြီး ရဲတွေအား ပြည်သူတွေ ပေါက်ကွဲ ဆဲဆိုနေကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်